Imishini enhle kakhulu yeqhwa eChina
Akungabazeki ukuthi ubuchwepheshe be-tube ice machine buqhamuka eVogt USA, futhi benza imishini ye-tube ice engcono kakhulu. Isikhathi eside, iVogt ibusa kakhulu emakethe ngobuchwepheshe bayo obuphezulu. Ukhiye walobo buchwepheshe uphathelene nokulawulwa kokunikezwa koketshezi ohlelweni. Ngemuva kwama-disas ...
Ukugcinwa njalo komshini weqhwa
Yini okufanele inakwe ekunakekelweni kwansuku zonke komshini weqhwa, futhi lezi zinto ezinhlanu ezilandelayo kufanele zenziwe ngokucophelela ngenkathi zisetshenziswa: 1. Uma kunokungcola okuningi emanzini noma ikhwalithi yamanzi ilukhuni, izoshiya isilinganiso esikalini ithileyi elenza i-evaporator elenza isikhathi eside, futhi t ...
Isimiso sokusebenza somshini weqhwa II
Ⅱ. Ukuhlukaniswa kwesakhiwo Ngokwezindlela ezahlukahlukene zokuphakelwa kwamanzi, kungahlukaniswa kube yizinhlobo ezintathu: uhlobo lwesifutho, uhlobo lokuntywilisela nohlobo lwamanzi asebenzayo. Ukwakheka komshini wokufafaza kukhonjisiwe kuMdwebo 3. Iphampu yamanzi ifafaza amanzi ku-evaporator ephezulu, ne-evaporator ice tray i ...
Isimiso sokusebenza somshini weqhwa 1
Uyini umgomo osebenzayo womshini weqhwa? Kulinganiselwa ukuthi wonke umuntu akayazi le nkinga. Lo mbhalo uzochaza ngemigomo yokusebenza nokuhamba komsebenzi komshini weqhwa ngokuningiliziwe ngomdwebo wesikimu. Umenzi weqhwa uhlobo lwensimbi yemishini efrijini epholisa amanzi ...